उस्तै आरोपमा नेकपा नेतृत्वको रबैया : मन नपरेकालाई दण्ड, मन परेकालाई पुरस्कार ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more उस्तै आरोपमा नेकपा नेतृत्वको रबैया : मन नपरेकालाई दण्ड, मन परेकालाई पुरस्कार !
उस्तै आरोपमा नेकपा नेतृत्वको रबैया : मन नपरेकालाई दण्ड, मन परेकालाई पुरस्कार !	महरा, शेर बहादुर, शेर्पा र स्थापित दण्डित, पौडेल, राई पुरस्कृत किन ?
अशोज १७ गते, २०७६ - १०:१३
काठमाडौं । कम्यूनिष्ट पार्टीहरुमा बेला–बेला विभिन्न नेताहरुको सांस्कृतिक विचलनबारे चर्चा चल्छ । सांस्कृतिक विचलनको कारबाहीमा परि कतिपय नेताहरुले राजनीतिबाट हातसमेत धोएका इतिहास पनि छन् । पद च्यूत, पद घटुवा, निलम्बनजस्ता कारबाहीहरु सांस्कृतिक विचलन कै कारण कतिपयले भोगेका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा सांस्कृतिक विषयलाई निकै महत्वका साथ पनि हेरिन्छ । सांस्कृतिक रुपमा कसैमा विचलन आएको खण्डमा पार्टीले हदैसम्मको कारबाही गरेको पनि भेटिन्छ । तर त्यहि कम्यूनिष्ट पार्टीभित्र कसैलाई कारबाही गरिरहँदालाई कसैलाई भने सम्मान गरिएको उदाहरण छ ।
भर्खरै अपुष्ट आरोप लगाएकै भरमा सभामुखसमेत रहेका कृष्णबहादुर महरालाई कारबाही हुँदा अर्का प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भने मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आसन गराएर पुरस्कृत गरिएको छ ।
महरामाथि एक रोशनी शाही नामकी महिला कर्मचारीले आरोप लगाएकै भरमा आवश्यक प्रमाणसमेत नजुटाई सबै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिईयो । उनिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधे झैं पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन गरियो तर, त्यहि प्रकृतिकै आरोप लागेका राईलाई भने सम्मान गरिएको छ ।
उल्टै पीडित भनिएकी बालिका खड्का नामकी महिलामाथि पार्टी राजनीति र जागिरबाट समेत निकाला गरि यता न उताको पारिएको आरोप खड्को छ । उनको निवेदनमाथि कुनै सुनुवाई नगरी उल्टै उनैमाथि कारबाही गरि राईलाई सम्मान गरिएको छ ।
थामथुम शेरधन काण्ड
तत्कालिन एमालेका नेताहरु शेरधन राई काण्डलाई निकै मेहनेत गरि नेतृत्व पंक्तीबाट थामथुम पारिएको आरोप लगाउने गर्दछन् । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शेरधन राईविरुद्धमा तत्कालिन एमालेमा परेको उजुरी गुपचुपमै टुंग्याएको उनिहरुको आरोप छ । अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीका अति विश्वास पात्र मानिने राईलाई गम्भीर आरोप लाग्दासमेत कारबाही नगरी झन् राजनीतिक रुपमा प्रोत्साहन गरिएको छ ।
शेरधन राईमाथि तत्कालिन युवासंघकी केन्द्रिय सदस्य र प्रधानमन्त्री सचिवालयकी अधिकृतसमेत भईसकेकी बालिका खड्कामाथि यौन हिंसा गरेको आरोप छ । बालिका खड्काले तत्कालिन नेकपा एमालेको केन्द्रिय कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई समेत आफुँ पीडित भएको निवेदन दिएकी थिइन् । खड्काले निवेदन दिँएलगत्तै तात्कालिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र युवासंघको केन्द्रिय सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएको थियो ।
खड्काले न्याय पाउनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत शितलनिवासमै गएर अनुनय गरेकी थिइन् । खड्काले पार्टीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौत, विष्णु पौडेललगायतलाई समेत अनुरोध गरेकी थिइन् ।
खबर डबलीसँगको कुराकानीमा बालिका खड्काले आफुँ अन्यायको परेको कुरा पार्टी एकतापश्चात पनि पार्टीका उच्च तहका नेतालाई भेटी न्याय पाउन गुहार मागेकी बताएकी छिन् ।
महरामाथि २४ घण्टाभित्रै कारबाही
एक ‘हाम्रो कुरा’ नामक अनलाईन मिडियामार्फत संसद सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारी रोशनी शाहीले सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाइन् । उनले आफुँमाथि महराले पटक–पटक दुव्र्यवहारको गरेको हाम्रो खबरलाई बताइन् । जसको आधारमा धेरै सञ्चारमाध्यमले महरालाई दोषी देखाउँदै समाचार तथा टिप्पणीहरु प्रकाशन गरे ।
त्यहि समाचारकै आधारमा खुमलटार र बालुवाटारमा आकश्मिक बैठक पनि डाकियो । खुमलटार र बालुवाटारको आकश्मिक बैठकले महरामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । बालुवाटार र खुमलटारको वैठकपश्चात आकश्मिक रुपमा पार्टी सचिवालय वैठक डाकी महरामाथि राजीनामा गर्न लगाउने निर्देशन गरियो ।
तर अनौठो, महरामाथि पार्टीले राजीनामा गर्न निर्देशन गरेको केहि समयमा नै पीडित भनिएकी आरोपित महिलाले आफ्नो बयान फेरिन् । उनले महरामाथि लगाएको आरोप सबै निराधार भएको पनि बताइन् । उनले आफुँ डिप्रेसनको रोगी भएको र रिसको आवेगमा गलत बयान दिएको भन्दै आफ्नो पूर्वबयान पनि फिर्ता लिइन् ।
नागरिक खबरमार्फत उनले आफुँले लगाएको आरोपबारे पुष्टि गरिरहँदा सन्दर्भ भने पुरै फेरिएको थियो । महरामाथि पार्टीले कारबाहीको डण्डा चलाएको थियो भने उनी सम्मानीत सभामुख र सांसदको पदबाट समेत पदमुक्त भईसकेका थिए ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको जस्तो महरा प्रकरण
महरामाथिको २४ घण्टे कारबाहीलाई प्रति कतिपय नेकपाभित्रकै नेता राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको भनि टिप्पणी गर्छन् । नेकपाका एक नेताले महरामाथिको कारबाही पूर्वएमाले पंक्तीको खेल भएको बताए । उनले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीसँगको टकरावको कारण उनिमाथि कारबाही गरिएको बताए । नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, “धेरै इश्यु थियो, जसरी नि महरालाई पन्छाउनु थियो । योजनाबद्ध रुपमा पन्छाईयो । अहिलेलाई सबै सफल पनि भए ।”
विश्वास नलाग्ने शाहीको आरोप
कृष्णबहादुर महरामाथि पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ । उनले सभामुख पदबाट राजीनामा पनि दिईसकेका छन् । उनीमाथि हाल पार्टी तथा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, उनैविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएकी रोशनी शाहीको बयान भने पुरै बाजिएको छ ।
उनले मिडियासँग अनौठो अनौठो बयान दिएसँगै उनले आफ्नो समस्या पनि खोलेकी छिन् । शाहीले आफुँ डिप्रेसनको रोगी भएकोसमेत बताएकी छिन् । शाहीले मिडियामार्फत नै सार्वजनिक गरेको तथ्यलाई हेर्दा उनि लामोसमयदेखि डिप्रेसनको रोगी छिन् र उनि नियमित औषधी सेवन पनि गर्छिन् । शाहीले नै बताएअनुसार उनले औषधी नखाएको वा धेरै खाएको बेलामा के बोल्छिन् उनैलाई थाहा हुँदैन ।
शाहीले आफुँलाई मिडियाले गलत बयान दिन लगाएको पनि बताएकी छिन् । उनको फेरिएको बयानले उनिमाथि स्वास्थ्य समस्या प्रष्टै भएको र उनको आरोपमाथि पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
आरोप उस्ताउस्तै तर कोही दण्डित कोही पुरस्कृत
केही समय अघि नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेले बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गरेको समाचार आयो । अन्तत उनले किनेको भनिएको जग्गा सरकारी नै रहेको पुष्टी समेत भयो । तर उनले आफुले कोही व्यक्तिसँग किनेको भनेर प्रष्टीकरण दिएकै भरमा उनीमाथि कारवाही त परै जाओस स्पष्टीकरण र नेकपाको बैठकमा छलफलको विषय समेत बनेन ।
शेरधन राईमाथि यौन हिंसाको आरोप लगाउँदै तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा काम गरेकी बालिका खड्का न्यायका लागी नेताहरुको घरदैलोमा दौडिईरहेकी छिन । तर खड्काका अनुसार कारवाही वा स्पष्टीकरण त परै जाओस खड्कालाई नै नेताहरुको घरदेखि सिंहदरबार छिर्न समेत प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
राई बरु उल्टो मुख्यमन्त्री बनाइए । खड्का आजपनि न्यायका लागी भौतिरिईरहेकी छिन् । राईको विषयमा पनि नेकपाले छलफल जरुरी ठानेन ।
तात्कालिन कानुनमन्त्री तथा नेकपा नेता शेर बहादुर तामाङ्ले बोल्ने क्रममा भाषिक त्रुटी गर्दा उनको मन्त्री पद नै गयो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा तामाङले बंगलादेशमा डाक्टरी पढ्न जाने छात्राहरूले सर्टिफिकेटका लागि आफ्नो अस्मिता सुम्पनुपर्ने बाध्यता रहेको आफूले सुनेको बताएका थिए । उनको अभिव्यक्ति गलत भएको र यसले बंगलादेशमा पढेका तथा पढिरहेका छात्राहरूको असिम्तामाथि नै धावा बोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना पनि भयो । आलोचनापछि पार्टीको निर्देशनमा तामाङले पदबाट राजीनामा दिए ।
‘मि टु’ अभियानमा प्रदेश नम्बर ३ का तत्कालीन भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री केशव स्थापित पनि जोडिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयरसमेत रहेका स्थापितलाई दुई महिलाले केही वर्ष अघि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । उनलाई पनि नेकपाले रजनीनामा दिन भन्यो र उनीप्रति अनुदार देखियो ।
लक्की शेर्पा कारवाहीमा पर्ने नेकपाकी अर्की पात्र हुन् । उनी अष्ट्रेलियाका लागी नेपाली राजदुत थिइन् । शेर्पामाथि उनकै चालक वाड्चु शेर्पाले पैसा लिएर आफूलाई अस्ट्रेलिया ल्याएको आरोप लगाएपछि उनलाई पनि नेकपाले राजीनामा दिन लगायो ।
इण्डो प्यासिफिक मुद्दा र महराकाण्डबिच छ साइनो ?
यो सहयोगलाई कतिपयले अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको समर्थन खोजेको अर्थमा समेत आलोचना गर्दै आएका थिए । यो हिसाबले अमेरिका र सरकारभित्रकै एउटा पक्षले यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन चाहन्थ्यो । संसदबाट पारित गराउन सकेको खण्डमा यसले सन्धी या सम्झौताको हैसियत पाउन सक्थ्यो र सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा समेत यो सरकारकालाई बाध्यकारी बन्थ्यो ।
केहि समय अगाडि अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि महराले सहयोग गरेका थिएनन् । संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको ७९ अरब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता महराले अड्काएका थिए ।
अशोज १७ गते, २०७६ - १०:१३ मा प्रकाशित